Somaliland: “Muuse Biixi Waa Nin Ku Noolaynaya Ama Ku Dilaya Oo Go’aan Leh, .Axmed Muumin Seed - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Muuse Biixi Waa Nin Ku Noolaynaya Ama Ku Dilaya Oo Go’aan...
Guddoomiye ku xigeenkii hore ee xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Mudane siyaasi Axmed Muumin Seed oo dhawaan si rasmi ah ugu biiray xisbiga Muxaafidka ah ee KULMIYE ayaa ka warramay ujeedooyinka rasmiga ah ee uu ku doortay in uu ku dhiso Hogaamiyaha xisbiga KULMIYE ahna Musharraxa xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi iyo waliba sababta aanu wax xil ah uga qaban xisbigaasi oo aanu ku biiritaankiisii uu ku biiray ku dhaafsan wax xil ah iyo jawaabta uu arrinkaasi uga hayo dadka in badan waydiiya waxa uu dhaafsaday xilkii Guddoomiye ku xigeen ee WADDANI ee uu isaga tagay ee uu ka helayo xisbiga KULMIYE.
Mudane Axmed Muumin Seed, Guddoomiye ku xigeenkii hore ee xisbiga WADDANI ayaa ka hadlay sidoo kale shakhsiyadda dhabta ah ee hogaamineed ee Muuse Biixi Cabdi iyo sababta uu u doortay in uu dhiso isaga oo aan wax xil ah ka hayn xisbigaasi KULMIYE.
Sidan waxa uu siyaasi Axmed Muumin Seed ka sheegay mar uu ka hadlayay xaflad ballaadhan oo xisbiga KULMIYE ku soo dhaweeyey haween badan oo lagu sheegay in ay kasoo digo rogteen xisbiga WADDANI kuna soo biireen xisbiga KULMIYE kuwaasi oo ahaa taageerayaal si weyn u taageeri jiray Axmed Muumin Seed iyo guud ahaan xisbiga WADDANI.
Axmed Muumin Seed oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi:
“Dad badani waxa ay I waydiiyaan waxa aad ahayd Guddoomiye ku xigeenkii Xisbiga WADDANI iyo aasaasihii xisbiga markaa haddii aad ku sii biirtay Xisbiga KULMIYE muxuu ku siinayaa, dadkaasi waxaan u sheegaa in aanan anuu qabanayn xil aan dastuurkeena iyo shuruucda axsaabteena ku qornayn in aanan qabanayn.
Ma doonayo in aan Somaliland sharci darro u horseedo oo aan qaato xil aanay shuruucdu dhigayn. Waxa aan go’aan ku gaadhay in aan masiirkaygii siyaasadeed, taageerayaashaydii iyo awooddii aan dalka ku lahaa ee xisbinimo, tii dhaqaale iyo tii kartiyeed ee Ilaahay I siiyayba inaan ku dhiso Musharraxa Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi anoon wax shuruud ah ku xidhayn. Waxa aan sidaa u yeelay waxa weeye oo muhiim ay tahay in aan dhawrno shuruucda qarankeena.
Ta xisbiyada in aynu dhawrno oo maanta haddii uu Muuse aniga ii magacaabo Hogaamiyaha KULMIYE dee halkuu distoorka KULMIYE kaga qoran yahay hogaamiye iyo xeer hoosaadba xisbiyadaba?, halkuu kaga qoran yahay?, dee kuma qorna. Waa wareebe u taag uun. Markaa intii aan waraabe u taag noqon lahaa waxaan ka door biday in aan abaalkayga dib u dhigto oo aan maanta Muuse Biixi dhiso oo soo saaro”.
Siyaasi Axmed Muumin Seed oo ka hadlayay sababta uu u doortay in uu taageeradiisa ku xoojiyo Muuse Biixi Cabdi waxa uu yidhi: “Sababta aan haddaba Maanta Musharrax Muuse Biixi ku doortay maxay tahay?. Muddo badan oo afar bilood ah ayaan dibadda taagnayn. Xisbiyada oo dhan baan soo wada maray.
Sababaha aan Muuse Biixi ku raacay waxa ka mid ah in aanu Muuse Biixi beenaale ahayn. Waa nin hadallo cad oo ama ku dili kara ama ku noolayn kara. Waa nin qaab hogaamiyeed u leh in uu go’aan qaadan karo waana nin aan mus dambeed lahayn.
Mus-dambeedkiisu waa aqoonta iyo kartida uu qofku xisbigiisa ku maal gashado. Markaa runtii calaamadihii hogaamineed wuu leeyahay” ayuu yidhi Axmed Muumin Seed, Guddoomiye ku xigeenkii 1aad ee hore ee xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI.